Maamul Gabaleedka Somaliland iyo Kooxda Jwxo-shiil, oo Xidhiidh Cusub Dhexmaray Dhawaan – Rasaasa News
Aug 29, 2010 dambiile, Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Maamul Gabaleedka Somaliland iyo Kooxda Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF, oo Xidhiidh Cusub Dhexmaray Dhawaan, siiraanyo
Tan iyo intii madaxweynenimada maamul gabaleedka Somaliland loo doortay Maxamed Maxamuud Siiraanyo bishii July 2010, ayaa waxaa soo baxaya siyaasado aad uga gadisan siyaasadihii hore ee uu raacayey M/weynihii hore Daahir Riyaale Kaahin [daahir-dheere].
Madaxweyne Siiraanyo oo sanooyin badan sugayey sidii uu mar uun u noqon lahaa madaxweynaha maamul galbaleedka waqooyi galbeed ee Somaliya, balse hankiisa madaxweyne kuma ekayn Somaliland.
Siiraanyo, in uu madaxweyne ka noqdo maamul galbaleedka Somaliland waxaa ka dameeyey dalal carbeed, oo ku bixiyey dhaqaale badan.
Dalalka carabta ayay dadweynaha Somalidu ku barteen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dhulka Somaliya. Mana jiro dal carbeed oo dadaal u galay in ay Somaliya dib u hesho dawladnimo, waxaa kale oo aan gargaar ka helin Somalida Qaxootiga ah.
Dalalka Carabta ayaa umada Somaliyeed waxay u isticmaalaan uun danahooda gaarka ah. Taageero ka timaada dalalka carbeed ayaa ah mid dan leh.
Dalka Masar oo ah dalalka ugu kurkurka roon dalalka carabta, ayaa waxaa soo kala dhexgalay dalka Itobiya khilaaf ku saabsan biyaha wabiga Nile, iyada oo la filayo in ay aad badan doonto baahida biyaha ee Itobiya.
Itobiya ayaa la filayaa in ay soo saarto shidaalka Ogadeen, arintaas oo dalka Itobiya ka dhigidoonta dalka ugu awooda badan dalalka gabalka.
Dalalka carabta ayaan arintaas ku faraxsanayn raalina aan ka ahayn in la soo saaro shidaalka Ogaden, cidii doonta ha soo saartee [Somaliya ama Itobiya].
Masar ayaa waxay bilowday olole ka dhan ah arimaha ay wado Itobiya ee ku saabsan qaybsashada biyaha wabiga Nile, masar ayaa jecel in ay isticmaasho dadka Somaliyeed waxayna bilowday arimahan;
1. Jiritaanka in Somaliweyn la helo waa muqadas.
2. Dhulka Somalida ee ay Itobiya haysato [Ogaden], waa xiligii laga goyn lahaa Itobiya.
3. Somaliland waa gabalka kaliya ee soo celin kara magacii iyo midnimadii Somaliya.
Arimahan ayey dawlada Masar si xawli ah u wadaa, waxayna si qarsoodi ah ugu kulmisay dalkeeda qaar ka mid ah kooxda Jwxo-shiil iyo masuuliyiin wakiil ka aha Siiraanyo maamulkiisa.
Waxay dhawaan qaban doontaa shir lagu qaban doono Hargeysa oo loogu gogol xaadhayo kulan balaadhan oo ka dhici doona dalka Turkiga lana doonayo in dib u heshiisiin dhab ah oo Somaliya lagu qabto. Waxaana la filyaan uu hirgalo hanka Siiraanyo oo ahaa in uu mar madaxweyne ka nodo dalka Somaliya oo wada jira.
Xidhiidhkii u dhaxeeyey Somaliland iyo Itobiya ayaa hoos u dhacay tan iyo intii uu yimid Siiraanyo. Rajadii weynd ee ay ka qabtay in ay dekada Berbera u isticmaasho dhoofinta shidaalka Ogaden ayaa hoos u dhacday.
Dhinaca kale waxaa ka socda Somaliland olole uu wado ururka Alshabaab oo isticmaalaya xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, oo si xawli ah hub ugu soo guray magaalada Hargeysa.
Somaliland ayaan bilaha dhaw haysan doonin nabadii lagu yiqiin, lana filayo in ay ku hardami doonaan Somaliweyne iyo ururada diimeed ee koonfurta Somaliya.
Odayaasha Reer Dhagaxbuur oo Gogol Dhigay Faafi iyo Maryakanka oo uu Kulan Kale ka Socdo